HomeAfaan OromooBeeksisa Walgahii Ummataa
Gara: Jaarmolee, Hawaasota, Waldoota Amantaa, Waldaalee Dubartootaa , Dargaggoo Oromoo, fi Ummata Oromoo ardiilee adunyaa mara irraa fi Oromiyaa keessa jiraattan hundaa
Nagaa Oromummaa bakka jirtan maratti isinii dhaamna!
Gaaffiilee haqaa ummatni tokko bilisummaa, dimokrasii, walqixxummaa, tasgabbii, fi nagaa akka dhugoomaniif gaafatu silaa imaammata siyaasaa fi bulchiinsa mootummaa biyya sanaa tahee ittiin hojjetama. Haa tahu malee, impaayeera Habashaa kan biyya Xoophiyaa jedhamee beekame keessatti gaafilee haqaa (justice) kanneen sabni Oromoo gaafate, mootummoti Xoophiyaa dhufanii darban jallisudhaan (haqaaqudhaan) akka diiggaa biyyaatti fi farra tokkummaatti fudhatuun, duullii qaamaa fi qalbii osoo wali irraa hin citin baroota dheeraaf ummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira.
Yeroo ammaa, humni angoo mootummaa Xoophiyaa dhaalee jiru, shororkaa fi rorroo rogaalee danuu qaban Oromiyaa golee mara keessatti deemsisaa jira. Fakkenyaaf, hogganoota jaarmolee Oromoo fi Oromoota qaroo mana hidhatti guuruu fi ajjeesuu, walumaa gala ummata Oromo irratti aangoo qabu hundaan duula sanyii daguuggaa gaggeessaa jira.
Kun maaliif deemsifama; duula sanyii daguuggaa kana irraa akkamitti Saba Oromoo baraaruu dandeenya? jedhnee wal marihachuun dhimma belbeltuu wanna taateef, mata-duree “Beekumsa hidhachuudhaan Oromoo fi Oromiyaa roorroo diinaa irraa haa baraarru!” jedhuun yaa’ii tokko qopheessineerra. Yaa‘iin kun gaafa Hagayya 15, 2020, sa’aa 14:00 – 18:00 (akka lakkoofsa Berlin) kallattiin karaa “Stream Yard” Mediyaalee Oromoo gara garaa irratti tamsa’a. Lakkofsi yeroo Berlin 14:00 (2:00 PM) = Washington DC (8:00 AM), Melbourne VIC (22:00/10:00 PM), Johannesburg (14:00 /2:00 PM), East Africa (15:00 / 3:00 PM, Dubai (16:00 / 4:00 PM). Sagantaa yaa`ii ergaa kanaa jalatti qabsisuun isinii ergudhaan kabajaan isiin afeerra.
Koree qindeessituu sagantaa yaa’ii